Ciidanka Xoogga dalka oo Howlgal ku dilay Maleeshiyo ka tirsan Kooxda Argagixisada Al-Shabaab – Radio Muqdisho
Ciidanka Xoogga dalka oo Howlgal ku dilay Maleeshiyo ka tirsan Kooxda Argagixisada Al-Shabaab
Ciidamada Militariga Soomaaliya ee ku sugan gobolka Jubbada Hoose ayaa dilay koox malleeshiyo ka tirsan Al-shabaab kaddib markii ay qaadeen weerar qorsheysnaa.
Taliska qeybta 43-aad ee Xoogga dalka Soomaaliyeed ayaa u xaqiijiyey warbaahinta Qaranka in ay duleedka Baar-sanguuni ka fuliyeen howlgal lagu bartimaameedsanayey malleeshiyo ka tirsan Al-shabaab oo si dhuumaaleysi ah ku joogtey goobtaas, isla markaana weerarka ay ku dileen in ka badan 15 Al-shabaab ah.
Ciidanka Militariga Soomaaliya ayaa qabsadey Hubkii ay siteen kooxda lagu khaarajiyey howlgalka, kaas oo isugu jira Qoryaha fudud, Rasaas iyo walxaha Qaraxyada laga sameeyo.
Dhinaca kale Horjooge Cali Cabdullaahi Sadiiq oo Al-shabaab u qaabilsanaa deegaan lagu magacaabo Muuse Xaaji oo ka tirsan Jubbada Hoose ayaa isu dhiibay ciidanka Xoogga dalka, horjoogahaas ayaa lagu soo bandhigay deegaanka Baar San-guurni, waxa uu shegay in uu muddo ku fakarsanaa sidii uu uga baxsan lahaa kooxda hororka ah ee Al-shabaab, fursad weynna uu u arko in uu gacanta dowladda soo galay.
Ciidamada Xoogga dalka Soomaaliyeed ayaa laba jibaaray howlgallada ka socda gobollada Jubbooyinka, toddobaadkii hore degmada Jilib ee gobolka Jubbada Dhexe ayaa dhaawac culus loogu geystay Dhagar-qabe horjooge Bashiir Qoor-gaab kaddib howlgalkii ay ciidanka amniga Soomaaliya ugu magac dareen haddiyadda xorriyadda.
Duqa Muqdisho oo ku bogaadiyey bulshada Gobolka kaalintii ay ka qaateen xuska todobaadka xorriyadda+Sawirro
Todobaadka Xoriyadda Soomaaliya oo si weyn looga xusay Mareykanka “SAWIRRO”
Todobaadka Xoriyadda Soomaaliya oo si weyn looga xusay Mareykanka "SAWIRRO"